आयो तिहार, गयो तिहार(फोटोफिचर)
byShyam Rana magar - November 16, 2020
थाहै नपाई समय कति चाँडो फत्कि जान्छ ?
एकै छिन सोच्नुस् त, खासमा जिन्दगी भन्नु नै के रहेछ र ! हिजोसम्म भोली तिहार आउला, मनाउला !
कति धेरे उमंग छाएको थियो ।
तिहार आयो, पत्तै नपाई गयो । समयको सन्दुकभित्र तिहार अब वर्ष दिनसम्मका लागि बन्द भै गयो ।
यसपालि तिहारमा निधार खालि रह्यो । मेरो स्मृतिमा रहेसम्म आजसम्म यो दोस्रो निधार खालि रहेको तिहार हो । अरु बेला घरबाहिरै रहे पनि चाडबाडमा सधै घरमै हुने म, तिहारलाई दोस्रो पटक अनुभव गर्दै छु ।
हुन त तिहार यसपालि समबैको खल्लो भयो । तिहारका देउसी भैलो गीत यो पालि गुञ्जिएनन् । युट्युब, टेलिभिजन र मोबाइल ग्यालरी बाहेक अन्त कतै तिहारे गीत बजेनन् यसपालि । मैले त सुनिन् । तपाईले सुन्नु भयो ?
अर्को रमाइलो पाटो । देउसी, भैलो नखेले पनि घर भित्र रमाइलो गरि मनाउन कसैले कुनै कसुरु बाँकी राखेनन् । जो जहाँ हुनुहुन्छ । रमाइलो गरि मनाउनु भएको होला । म यही अनुमान गर्छु ।
कोठाभित्र वाक्क, दिक्क, प्याक भएर बसेको मलाई । आजका केही दृश्यले खुसी तुल्याए । सन्तुष्ट बनाए । बेलुकी पख टहलिन बाहिरफेर ननिस्केको पनि धेरै समय भै सकेको थियो । त्यकारण बाहिरको वातावरणबारे आजकाल धेरै जानकार छैन ।
कोठा नजिकै ठड्याइएको पिङमा आज बढ्तै रमाइलो थियो । त्यहाँको हा, र हुको आवाजले म पनि एकै छिन पुगेर हेरें । म आफू भने पिङ खेलिनँ । मलाई पिङ खेल्न एकदमै डर लाग्छ ।
करिबन ५ वर्ष अघि अमरसिंह मेलामा एकपटक खेलेको थिएँ । त्यसपछि म कतै पनि पिङ खेलेको छैन । गाउँतिर पनि म पिङ खेल्थिनँ । उसो त म खेलप्रेमी होइन् । खेलबारे म जानकार छैन । म कुनै पनि खेल हेर्दिनँ । यो मेरो नराम्रो बानीमध्येको एक हो । यसबाट पनि तपाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । म कति धेरै असामाजिक छु ।
तर, आज किन किन आज केटाकेटीहरु पिङ खेलेको दृश्य पनि खुबै मन प¥यो । मच्चि मच्चि पिङ खेलेको हेरेर मैले खुबे इन्जोय गरें ।
तपाई पनि आगे हेर्नुस् है त केही फोटोहरु,...